British Virgin Islands အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ရေးစင်တာ
နေအိမ် / အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက် / British Virgin Islands အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ရေးစင်တာ
06/01/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အသစ် British Virgin Islands အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ရေးစင်တာ ("BVI ပိတ်ပင်") ပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 16 နိုဝင်ဘာလ 2016. ဤသည်ခုံသမာဓိအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်သူ့ဟာသူဖော်ပြထားတယ် "လွတ်လပ်သောမဟုတ်-များအတွက်အကျိုးအမြတ်အဖွဲ့အစည်း"တစ်ဦးပေးဖန်တီးခဲ့"တဘက်ဘက်မပါသော, မျက်နှာမလိုက်သော, ကာရစ်ဘီယံအတွက်အကျိုးရှိစွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းအဖွဲ့အစည်း, လက်တင်အမေရိကနှင့်ကျော်လွန်."
ကိုယ်ကသာအပေါ်ခဲ့သည် 25 မေ 2014 ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားရေးအနုညာတဆုပေးပွဲ၏အာဏာတည်ခြင်းအပေါ်နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်းဖို့ပါတီဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်း 1958. ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းကနေပါတီများနှင့်အတူများစွာသောခုံသမာဓိရှိပါပြီပေမယ့်, သူတို့ကိုယ်သူတို့အငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်းဘို့ဆင်းရဲသားရွေးချယ်မှုခဲ့ကြသည်ဥပမာ British Virgin Islands ဒီယနေ့အထိကြိုတင်, ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းတစ်ထိုင်ခုံနှင့်အတူပြန်ဆိုခဲ့ခုံသမာဓိဆုအလွယ်တကူအခြားခုနှစ်တွင်ပြဌာန်းမရနိုင်တော့အဖြစ် 155 နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်းဖို့ပါတီများဖြစ်ကြောင်းစတိတ်.
အဆိုပါ BVI ပိတ်ပင်ဗြိတိန်ဗာဂျင်ကျွန်းအနုညာတစီရင်အက်ဥပဒေအောက်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည် ("ဥပဒေ") ၏ 2013, အရာအပေါ်အင်အားသုံးသို့ကြွတော်မူ 1 အောက်တိုဘာလ 2014, နှင့် "ခဲ့အဆိုပါ BVI မှခုံသမာဓိများခေတ်မီအခြေခံမူများနှင့်အလေ့အကျင့်ကိုရောက်စေဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်တရားမျှတသောတည်ထောင်ရန်ရည်ရွယ်, အငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်အရာအတွင်းအကျိုးရှိစွာနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဥပဒေရေးရာ frame ကိုအလုပ်." ၏အက်ဥပဒေ 2013 အဓိကအားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအနုညာတစီရင်အပေါ် UNCITRAL မော်ဒယ်ဥပဒေအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခဲ့ပါတယ်.
ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းအင်တာနေရှင်နယ်အနုညာတစီရင်ရေးစင်တာခုံသမာဓိယောဟနျသ Beechey CBE ကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မည်, မစ္စတာနှင့်အတူ. Cherno Jallow, QC, ဒုတိယဥက္ကဌအဖြစ်. ဖြည့်စွက်ကာ, အဆိုပါ BVI ပိတ်ပင်ဘုတ်အဖွဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့ကခန့်အပ်ငါးခုအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည်. အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်များကမစ္စတာများမှာ. ယောဟနျသ Beechey (ဥက္ကဋ္ဌ), မစ္စတာ. Cherno Jallow, QC (လက်ထောက်ဥက္ကဌ), မစ္စတာ. မာကု Fort (အဖှဲ့ဝငျ), မစ္စတာ. Murray စမစ် (အဖှဲ့ဝငျ) နှင့်မစ္စ. Felice Swapp (အဖှဲ့ဝငျ).
လှည့်ပတ် 200 ယောဂီအလားအလာခုံသမာဓိလူကြီးအဖြစ် BVI ပိတ်ပင်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပါလိမ့်မည်, အင်္ဂလိပ်အပါအဝင်အများအပြားဘာသာစကားများခုံသမာဓိလုပ်ဆောင်သွားရန်, စပိန်, ရုရှားနှင့်တရုတ်. အဆိုပါစင်တာစွယ်စုံများနှင့်ထိရောက်သောဖြစ်ရည်ရွယ်, နှင့်ဒေသတွင်း၌ခုံသမာဓိအငြင်းပွားမှုများအမျိုးအစားအားလုံးကိုကြိုဆို.
အဆိုပါ BVI ပိတ်ပင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ခုံသမာဓိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအောက်မှာအုပ်ချုပ်ပါလိမ့်မည် (ထိုနေ့ရက်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, 16 နိုဝင်ဘာလ 2016, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတွေ့ရှိခဲ့) နှင့်ခုံသမာဓိများနှင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေတရားစွဲဆိုမှု၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်အဆောက်အဦများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးသွားမှာပါ. ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းအနုညာတစီရင်ရေးစင်တာခုံသမာဓိများနှင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေတစ်လျှောက်လုံးပါတီများနှင့်ခုံသမာဓိခုံရုံးမှအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာထောက်ခံမှုပေးသွားမှာပါ.
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, British Virgin Islands အနုညာတစီရင်
LCIA - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်၏လန်ဒန်တရားရုံး
အားကစားအဘို့အနုညာတစီရင်၏တရားရုံး (CAS) နှင့်အားကစားဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ